FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBosnian IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChol IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNepali IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseCuzco) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTojolabal IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiLow German isiZapotec (saseIsthmus)
Ngenxa yokuthanda kwawo uThixo nommelwane, amaNgqina kaYehova ayakuthanda ukuncokola nabo bonke abantu ngomyalezo weBhayibhile, nkqu nabo bebengenamdla kwixa elidlulileyo. (Mateyu 22:37-39) Ukuthanda uThixo kusibangela ukuba sithobele umyalelo woNyana wakhe wokuba “sinikele ubungqina obucokisekileyo.” (IZenzo 10:42; 1 Yohane 5:3) Ukuze sikwenze oku, asiyi kube kanye ebantwini, kanye njengokuba abaprofeti bakaThixo bakudala babesenza. (Yeremiya 25:4) Siyabathanda abamelwane bethu, ngoko sizama ngako konke ukuxelela bonke abantu ‘iindaba ezilungileyo zobukumkani,’ nkqu nabo babengenamdla ekuqaleni.—Mateyu 24:14.
Kuqhelekile ukuba sifike abantu ababengenamdla ekuqaleni benomdla. Nazi izizathu:
Abanye abahlala kuloo ndlu banomdla kumyalezo esiwuphetheyo.
Abantu bayatshintsha. Izinto ezenzeka kweli hlabathi nezinto ezibehlelayo zibangela ukuba abanye ‘bayiphaphele intswelo yabo yokomoya’ baze babe nomdla kumyalezo weBhayibhile. (Mateyu 5:3) Nabo bebesichasa basenokutshintsha, njengokuba kwaba njalo nakumpostile uPawulos.—1 Timoti 1:13.
Sekunjalo, asinyanzeli mntu ngomyalezo esiwuthunyiweyo. (1 Petros 3:15) Sikholelwa ukuba mntu ngamnye umele azikhethele indlela afuna ukunqula ngayo.—Duteronomi 30:19, 20.
Funda ukuba yintoni esiyikholelwayo ngosindiso nendlela olufunyanwa ngayo.